Ihe nke formatting a mbanye
E nwere ọtụtụ iri puku ndị mere na-metụtara usoro ngwaike components na software dị ka nke ọma na-eme ka n'aka na flash mbanye na-abụghị nanị formatted ma yiri usoro a na-rụrụ iji jide n'aka na onye na-akawanye nsonaazụ kacha mma na ikpe nke njehie na data metụtara mbipụta na mbanye Ọ na-e kwuru na ọtụtụ n'ime ndị ọrụ mepụta format metụtara ihe aga-eme na mbụ aka nke bụ kpam kpam ihe ọjọọ n'ihi na ndị formatting e mepụtakwara iji jide n'aka na ọ na-eji ka a ikpeazụ resotu na-eme ka n'aka na nke na-egbo. Ọ na-ekwesịghị rụrụ na akpa ebe na maka otu ihe a na nkuzi e mepụtara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe Filiks na-metụtara formatting na ọ bụrụ na e mere na-enweghị ndị data ndabere mgbe ahụ yiri ngwá ọrụ na-ejikwa ya iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a. The Filiks na-kwuru ebe a bụ nnọọ mfe na-eso na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na arụpụta ihe kasị mma na-enwetara site na-esonụ ha dị ka ha na e kwuru okwu ya. N'okpuru bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị mere n'ihi na nke mbanye Ị:
• emerụ data
• USB adịghị ghọtara
• oge mbụ ojiji
• USB gosiri na usoro ma ọ dịghị ekwe ka imeghe ya
• The mbanye e emetụta virus na malwares.
Formatting a mbanye
Formatting Ọrụ Nchịkwa mbanye bụ mgbe otu ihe iseokwu na niile na onye ọrụ dị nnọọ mkpa ijide n'aka na na kwesịrị ekwesị usoro a rụrụ na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị-aga n'ihi na wuru na usoro ngwaọrụ ịrụ ọrụ ma ọ ga dịghị mgbe a ga-eme site na ụfọdụ ndị ọzọ software omume dị ka ha na-enweghị ka imebi na pụkwara echekwa data na-ebunye ya n'elu internet nke pụtara a nzuzo ehi ehi na a egwu egwu ka a oké ịgbatị. Onye ọrụ ya mere ịdabere na ngwaọrụ ndị na-nyere site Microsoft ma ọ bụ OS na bụ na iji iji jide n'aka na ọkaibe results na-enwetara. Usoro a ga-soro na nke a bụ ndị a na ọ bụ n'ezie mfe ozugbo gburu:
1. Mgbe inserting USB mbanye ruo n'ọdụ ụgbọ mmiri onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na kọmputa m na meghere na USB ziri ezi pịrị ịchọta format nhọrọ:
2. Ozugbo format nhọrọ a họọrọ na ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị ọhụrụ mkparịta ụka igbe ebe chọrọ nhọrọ na-ahọrọ na-arụpụta ihe kasị mma:
3. The nkà button a na-ahụ na-enwe ma onye ọrụ kwesịrị ichere ruo mgbe mmanya na-agwụ agwụ ma ọ bụ na-ahụ kwuru na ọ ga-mezue usoro n'ihi na onye ọrụ na zuru na ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro a ugboro ugboro N'ọnọdụ nile iji jide n'aka na ihe kasị mma a n'ihu usoro nakwa dị ka mbanye operationally.
Olee otú unformat a flash mbanye
E nwere ọtụtụ online nakwa dị ka offline omume na a pụrụ iji weghachi data na e furu efu ruru formatting. The online omume na-mgbe na-atụ aro na nke a ka ha na-abụghị nanị na a ahụhụ nche iyi egwu ma ha nwekwara ike ịzọpụta data idetuo na-ekesa ya n'elu internet. Ọ na-na--ahụ kwuru na offline omume na-niile bụghị trustable na nke a na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà omume na-eji. Wondershare Data Recovery Bụ otu ndị dị otú ahụ omume na a pụrụ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na nke a. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ọkaibe omume na a ga-eji iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma unformatting ọrụ enweghị ihe ọ bụla hassle na ọ bụrụ na e a oge ọzọ onye ọrụ na-akawanye usoro ihe omume na-eme ka n'aka na needful na okwu nke data mweghachi a mere. The yiri usoro dịkwa nnọọ mfe na-eso na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ọ na-soro na zuru enweghị awụgharị ọ bụla nzọụkwụ ya mere na ihe kasị mma na ọkaibe results na-enwetara enweghị ihe ọ bụla nke ma ọ bụ nsogbu na needful na-mere ngwa ngwa.
1. The URL http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html bụ ike tinye n'ọrụ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi software omume ebudatara ma wụnye enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu dị ka ọ bụ ukara njikọ nke usoro ihe omume ma e enịm ke Wondershare ukara website:
2. The faịlụ ụdị a na-ahụ na-ahọrọ iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye usoro-akpụ akpụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu:
3. The ọnọdụ ntụgharị USB mbanye na-ahụ na-ahọrọ maka Doppler mere na pin ebe search a mụụrụ na nke a:
4. Ozugbo faịlụ a natara ọ na-gwara iji jide n'aka na ndị kasị mma na-ahọrọ ma weghachi na iji naghachi button:
Ihe na-achọpụta tupu formatting / unformatting a flash mbanye
E nwere ọtụtụ ihe ndị na-ga-kwuru tupu mbanye bụ Ị na ọ na-agụnye mbanye ahụ ike, na ikpe nke na data ọnwụ mgbake omume bụ na-enyo enyo na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na ngwaọrụ ma ọ bụrụ emetụta malware ma ọ bụ nje bụ ozugbo formatted enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge
Ndepụta nke ihe omume ndị a ga-eweghachi bụ na-weere na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na arụpụta ihe kasị mma na-nyere site n'ịhọrọ ọkaibe omume mgbe ọ na-abịa unformatting. Ọ na-gwara ịhọrọ faịlụ na na-achọrọ ozugbo mgbake e dechara.
> Resource> Flash Drive> Best ụzọ Ọkpụkpọ na unformat gị flash mbanye